Kay iyo Gaas oo ku wada hadlay Garowe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 17 August 2014 18 August 2014
Mareeg.com: Wafdi uu hoggaaminayo madaxa Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Kay ayaa maanta gaaray magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland.
Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirrada ayaa wafdiga Qaramada Midoobay ku soo dhoweeyay magaalada Garoowe.
Intaas kadib ayaa Danjire Nicholos Kay iyo Martidii la socotay waxaa loo gudbiyay aqalka Madaxtooyada Dowladda Puntland,waxana halkaasi ku soo dhaweeyay Madaxwaynaha Dowladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas.
‘’Waxaa sharaf weyn noo ah in maanta aanu halkaan ku soo dhaweyno Wakiilka Xoghaya Guud ee QM ee Somaliya oo maanta nagu soo booqday Magaalada Garoowe, imaanshihiisana waxay muhiim u tahay inaan kawada hadalno xaalada Soomaliya iyo Gaar ahaan tan Puntland‘’ ayuu yiri Madaxwayne Gaas .
Danjire Nicholos Kay ayaa isna dhankiisa ka mahadceliyay Soo dhaweynta loo sameeyay isagoona sheegay in uu si aad ah ugu faraxsan yahay Imaanshihiisa Puntland,waxana uu sidookale cadeeyay in markii lixaad oo uu yimaado Puntland ay u tahay Maanta .
Kullan gaar ah oo ay wada qaaten Madaxwayne Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo Danjire Nicholos Kay ayaa waxa ay uga wada hadleen:-
1: Xiriirka u dhaxeeya Qaramada Midoobay iyo Puntland, waxaana la sheegay in labada Masuul isku afgarteen in la xoojiyo xiriirka wada shaqeyn ee u dhaxeeya untland iyo Q.M sida uu cadeeyay Madaxwayne Gaas.
2: Xiriirka u dhaxeeya maamulka Puntland iyo dowladda Fadaralka ah ee Soomaaliya.
“Qaabka loo wajahayo Doorashada Soomaliya ka dhacaysa 2016-ka oo ay ku dhamandoonto wakhtiga Madaxda Dowladda Fadaralka ah ee hada jirta arimahaas oo dhan oo muhim ah ayaanu kawada hadalnay runtiina si fiican ayaanu isugu afgaranay waxana rajaynaynaa in wax wanagsan ay uga soo baxaan Puntland iyo Soomaliya oo dhan ‘’Sidaasi waxaa yiri Madaxwayne Dr.Cabdiwali Gaas.
Nicholos Key ayaa xaqiijiyay in hashiiski dhawaan lagu saxiixay Maamulka Gobolada dhexe Saxiixiisuna uu ka dhacay Magaalada Muqdisho uusan waxna u dhimeyn dhulka iyo Gobolada ay leedahay Puntland .
“Wadahadal kadib waxaan rajaynayaa in xiriirka Puntland iyo Fadaralka uu si tartiib tartiib ah uu u hagaagayo anigana waxaan ku dadaalaya in wax kasta oo suurtagal ah xiriirkaasina ku wanagsanana lahaa aan horay u mariyo’’ayuu yiri Nicholos Kay.
Wuxuu ugu baaqay maamulka Puntland inuu gacan ka geysto sidii dalka ay uga qabsoomi lahayd doorasho marka la gaaro 2016.